Ikhaya - betterapp
Ii -apps ezilungileyo ze-Android, i-IOS kunye ne-Windows ye-2021
Ihlabathi lobuchwepheshe likhula rhoqo; Yonke imihla kukho iSoftware eninzi ephuhliswayo ukuze izalisekise kwaye izenzele imisebenzi emininzi eyenza ubomi bube lula, bukhawuleza kwaye busebenze ngakumbi. Ngesi sizathu SIYAKWAMKELA kwindawo yethu, eyilelwe ngenjongo yodwa yokuba unokufumana okuninzi kwi-Smartphone yakho, iThebhulethi kunye nekhompyuter yakho kungakhathaliseki ukuba inkqubo yayo yokusebenza yi-iOS, i-Android okanye i-Windows kwaye ngoko ukwandisa imveliso yakho.
Ngaba uyafuna ukufumana usetyenziso olungenasiphelo oluya kwenza ubomi bakho bube lula? Apha ungafumana ezona setyenziso zilungileyo zika-2021, ukukhuphela kwii-apps zokukhangela ezisisiseko ezinje: Facebook, Twitter, LinkedIn kunye ne-Instagram, imidlalo, khuphela iividiyo kwi-Android, uthotho, umculo, iipodcasts, iaudio, amanqaku, uluhlu kwii -apps ezona zininzi. ukufuna umdla kwii-SME, ii-freelancers, umthambo, ukhuseleko & ne-antivirus, usapho kunye nokuzonwabisa, ukubukela ibhola; kunye nezicelo zokufumana abantu ngaphandle kokwazi, ukutshintsha ubuso ukusuka kumadoda ukuya kwabasetyhini, ukufunda isiNgesi, kubantwana abane-autistic, nokuba ufuna ukubona inqaku elipheleleyo kuluhlu lwe-APPLETE google apps.
Ukongeza, sikwadibanisa amakhulu ee tutorials eziya kukunceda kuwo nawuphi na umsebenzi kwiPC yakho, i-smartphone okanye ithebhulethi, ukusuka kumanyathelo okwenza iakhawunti ye-netflix kwaye ayisiyiyo loo nto kuphela, sineendlela zokufuna ukwazi. mhlawumbi andithandi ukwazi ukukhangela igama lengoma ngesandi sayo
Khuphela eyona midlalo ibalaseleyo yemfazwe ngeSpanish yePC simahla, igcwele kwaye ilula 
Fumana imali ngeeapps zokuthengisa iifoto zeenyawo
Yenza awona magama ahlekisayo nawona alungileyo oMlilo wasimahla
Ezona zixhobo zibalaseleyo kurhwebo lwe-intanethi ukurhweba ngee-apps
Ii -apps ezilungileyo ze-dyslexia ezicetyiswayo kubantwana.
￼Isebenza njani i-sss TikTok eyona app yokukhuphela iividiyo
Usetyenziso lwe-OS (inkqubo yokusebenza)
Hlala usexesheni ngezona zixhobo zibalaseleyo ze-Android kunye ne-iOS zika-2021. Ungazikhuphela ngokuthe ngqo kumdlalo kaGoogle okanye kwi-App Store. Ngaba uyafuna usetyenziso lokuthumela umyalezo ngoko nangoko ukuhlela iifoto, ukukhuphela umculo, ukudibana nabantu abavela kwamanye amazwe, ukujonga imifanekiso, iividiyo, abadlali bomculo okanye ukukhusela iselfowuni yakho nge-antivirus efana ne-avast yokhuseleko lweselula? sinazo zonke ezi kwaye kakhulu nasiphi na isixhobo Android okanye iOS.
Izincamathelisi: Eyona app kunye nezixhobo zokuyila
Eyona Cryptocurrency Apps
3 Imidlalo yevidiyo epholileyo yasimahla yebluetooth yezixhobo ze-Android!
Ii-Apps zokuRekhoda ngokucothayo nangokukhawulezayo
Usetyenziso lwezempilo nezemidlalo
Sikubonisa ezona zicelo zibalaseleyo zokubeka iliso kwimpilo yakho okanye umsebenzi womzimba, ke ukuba uyathanda ukubaleka okanye wenze naluphi na uhlobo lomthambo kwaye ufuna ukulawula ukusebenza kwakho kunye neempawu ezibalulekileyo; Apha uya kufumana usetyenziso olungcono. Kwakhona, ukuba ufuna ukuqala inkqubo kwaye awazi ukuba ungaqala ngaphi, Khuphela naziphi na izicelo kwaye wonwabele umqeqeshi wobuqu we-intanethi okanye ulinganise umgama owuhambileyo ngebhayisekile yakho.
Ii-Apps ezilungileyo zokuBaleka-Ezizezinye ze-Ios kunye ne-Android
7 Ii-Apps ezilungileyo eziKuhlawulela ukukhwela
IiApps ezili-10 ezilungileyo zokuzilolonga
Ii-Apps ezilungileyo zokuzilolonga eKhaya mahala!
Ii-Apps ezilungileyo zokulandela iMidlalo-ezinye iindlela ezili-10 ze-iOS kunye ne-Android
7 ezona zokusebenza zilungileyo zokuqeqesha ekhaya
Usetyenziso lwaBafundi (Ezemfundo)
Ngaba uyafuna ukonyusa ulwazi lwakho lwemfundo nesayensi okanye ufunde ulwimi olufana nesiNgesi simahla? Ngoku unokukhuphela usetyenziso lokufunda iincwadi onomdla kuzo, abaguquleli abakufundisa ngaphezu kweelwimi ezingama-50 ezahlukeneyo, kunye nezicelo zejografi zokufumana amazwe kunye nemimandla yehlabathi.
Ii -apps ezili-15 ezilungileyo zabafundi ngo-2021
Izicelo zokufunda isiNgesi ngokukhawuleza nangokulula-I-10 eyona iphambili
IiApps ezili-10 zokuFundisa kooTitshala (i-Android NE-iOS)
I-13 ePhezulu kwezona ziThutho zilungileyo zokufunda isiNgesi
I-12 ephezulu kwezona Nkqubo ziBalaseleyo zaBafundi beeKholeji
Usetyenziso lokukhuphela uMculo kunye neAudio
Nokuba sisiphi isixhobo onaso, apha ungazifumana zombini izicelo zasimahla kunye nezihlawulelwayo ukunika umcofi wokudityaniswa nezixhobo zakho zobuchwepheshe.
Usetyenziso lokukhuphela umculo wasimahla kunye neevidiyo kwiYouTube kwifowuni yakho okanye kwikhompyuter
Izicelo zokumamela uMculo ngaphandle kwe-Intanethi
Abona badlali bali-9 babalaseleyo bomculo be-Android Yonwabele ngoku!
Ii-Apps zokukhuphela uMculo kwi-Android Mahala!
Ii-Apps ezilungileyo zokurekhoda iiFowuni kwi-Android
IiApp ezili-10 zokukhuphela uMculo kwiYouTube
izigaba Khetha udidi Android Ubugcisa kunye noYilo Ukutya Ukuthelekisa Iinqwelo zokuthenga ezemidlalo imfundo Ukuzonwabisa Indlela yokuphila imali Ukufota Zixhobo iOS iPad Imidlalo Eyona App Umculo kunye neAudio Iindaba neeMagazini Ukwenziwa komntu Imveliso Abadlali beeVidiyo kunye nabahleli Reviews Impilo & nokuPhila Yiba ngabazali A ngahlali Social Tutorials Akohlulwanga
Iimeko zemvumelwano ngokubanzi
Ilungelo lokushicilela 2019 - 2022 | BestApp | Onke Amalungelo Agciniwe
LinkedIn facebook Twilley youtube rss twitter instagram facebook-engenanto rss-engenanto indawo engenanto-engenanto Twilley youtube twitter instagram